चीनले भन्यो नेपालमा रेल कामभन्दा कुरा बढी! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > चीनले भन्यो नेपालमा रेल कामभन्दा कुरा बढी!
June 23, 2019 June 23, 2019 GRISHI460
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषयलाई लिएर नेपालमा चलेका टिप्पणीहरूप्रति चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ।
केही समयअघि काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्चीले पनि यस्तै आशयको धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
उनको आशयसँग मेल खाने गरी चिनियाँ पक्षले पनि बेइजिङमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसामु यस्तै संकेत गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बेइजिङबाट लक्ष्मी लम्सालले लेखेका छन्।
नेपाल–चीन रेलमार्ग सहयोगसम्बन्धी चौथो द्विपक्षीय सचिवस्तरीय वार्तामा पनि यस्तो दृश्य देखिएपछि नेपाली पक्ष मिडियासँग बोल्न हच्किएको थियो ।
‘चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टि बुझेरै हुन सक्छ, नेपालका कुनै पनि सदस्यले मिडियासँग प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सायद चिनियाँहरू यस विषयमा निकै संवेदनशील भएको नेपाली टोलीले महसुस गरेको हुन सक्छ।’
नेपालका मिडियामा चिनियाँ रेलबारे एकदमै ‘हाइलाइट’ भएका खबर चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा अनुवाद गरी छापिएका थिए । कामभन्दा कुरा बढी भइरहेको प्रति चीनले मौखिक असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ।
नेपालले जतिसुकै हतारो गरे पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा रेलमार्ग बनाउनुपर्ने भएकाले अध्ययन अझै जारी राख्ने मनस्थितिमा चीन पुगेको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार बेइजिङमा सम्पन्न चौथो सचिवस्तरीय वार्ता टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी) खर्च, रेलवे सर्भेलगायत विषय पाँचौं चरणको वार्ताले टुंग्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको फोन संवाद लिक
February 1, 2021 February 1, 2021 GRISHI